नेपालमा गुगलको नयाँ कार्यक्रम "आफ्नो भाषालाई माया गरौँ" घोषणा
Aakar September 22, 2015
गुगल अनुवादक (ट्रान्सलेट)मा, नेपालीलाई अन्य भाषा वा अन्य भाषालाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ? अजिव सुनिने/देखिने अनुवाद देखेर हाँस्नु भएको छ? साइटमा तथा मोबाइल एपमा, हिज्जे नमिलेका नेपाली भाषाका विज्ञापन देखेर, गुगल अनुवादलाई सम्झिनुभएको छ?
गुगल अनुवादकमा नेपाली भाषा २०१३ मा समावेश गरिएको भएपनि, अन्य भाषाहरु जस्तो नेपाली भाषा 'पर्फेक्ट' भइसकेको छैन । अत: अनलाइनमा नेपाली भाषा सुधार गर्नको लागि, गुगल'ले पहिलो पटक नेपालमा "आफ्नो भाषालाई माया गरौँ" कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अनलाइनमा नेपाली भाषा सुधार गर्नको लागि, मंगलबार सेप्टेम्बर २२ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म, ल्याङ्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र र अरू ४० भन्दा बढी स्थानीय शिक्षण संस्थाहरू, संघहरू र व्यवसायिक संगठनहरूसँगको सहकार्यमा ‘अाफ्नो भाषालाई माया गरौँ’ ट्रान्सलेटाथन गर्ने गुगल'ले जनाएको हो ।
गुगल एसिया प्यासेफिक, पब्लिक अफेयर र न्यु इमर्जिंङ मार्केट्स कम्युनिकेसन्सकी एमी कुनरोज्पान्या भन्छिन, “हामीलाई विश्वास छ, गुगल अनुवादले यो देशको लागि, यहाँको मानिसहरूका लागि र नेपाली भाषाको लागि नेपालीमा उपयोगी वेब बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ। हामी ‘अाफ्नो भाषालाई माया गरौँ’ अभियान सुरू गर्दैछौँ जस्ले गुगल अनुवादकको प्रविधि नेपाली भाषा मनपराउने समुदायहरूमाझ खुला गर्नेछ र सबै मिलेर हामीले नेपाली अनुवादनको गुणस्तर बृद्धि गर्न सक्नेछौँ जसले गर्दा नेपाली भाषा र संस्कृतिको उन्नति र संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ|”
'आफ्नो भाषालाई माया गरौँ' कार्यक्रम अन्तरगत, गुगल अनुवादक कम्युनिटि सार्वजनिक गरिएको छ । गुगल अनुवादक'मा पहिले देखि नै प्रयोगकर्ताले, अनुवादलाई सुधार्न मिल्ने सुविधा रहेको थियो । त्यसैलाई अझ रमाइलो र परिस्कृत बनाउन, गुगल अनुवादको नयाँ कम्युनिटि सञ्चालनमा आएको हो । गुगल ट्रान्सलेट कम्युनिटि, वेबमा वा गुगल ट्रान्सलेट मोबाइल एप डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ । गुगल अनुवादकमा हामीले नेपाली भाषालाई सुधार गर्न सक्यौँ भने, ईन्टरनेटमा धेरै कुरा नेपाली भाषामा उपलब्ध हुनेछ । गुगल अनुवादक कम्युनिटिमा, अनुवाद गर्न वा अरुले गरेको अनुवाद सही छ/छैन भनेर 'रिभ्यु' गर्न सकिन्छ । तपाईले गरेको काम'को आधारमा, तपाईको अंक बढ्दै जान्छ ।
गुगल अनुवादक'को ब्याकग्राउन्डमा, गुगल'ले मसिन लर्निङ प्रयोग गरेर, फलाना भनेको नेपाली भाषामा फलाना हो भनेर याद गर्छ । जस्तो हामीले बिरालोको आकृती देख्यौँ भने, यो बिरालो हो भनेर भन्छौँ, त्यसैगरि नै गुगल अनुवादले अंग्रेजीमा 'cat' लेखेको देख्यो भने नेपाली भाषामा 'बिरालो' भनेर याद गर्छ । त्यसको लागि सुरुमा गुगललाई बिरालो भनेको 'cat' हो भनेर बुझाउनुपर्छ । तर गुगल अनुवादलाई सिकाउन नेपाली भाषामा पर्याप्त सामाग्रीहरु नहुँदा, गुगल अनुवादकमा, प्राय: सोचेको जस्तो अनुवाद देखिन्न। अत: यही कुरा नै, सुधार गर्न या भनौँ गुगल अनुवादकलाई नेपाली भाषा चिन्ने बनाउन, ट्रान्सलेटाथानको आयोजना गरिएको हो । यदि तपाईहरु गुगल अनुवादमा नेपाली भाषालाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने गुगल ट्रान्सेलेट कम्युनिटिमा जानुहोस् । गुगल ट्रान्सलेट कम्युनिटि चलाउन, तपाई भाषाविद नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । गुगल'ले केही महिना अगाडि, नेपाली हेन्डराइटिङ (हस्तलेखन) किबोर्ड पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
गुगल अनुवादकमा नेपाली भाषाप्रेमी स्वयंसेवकहरुका देनको कारण नै आज, जिमेल, युट्युब लगायत गुगलका सर्भिसहरु नेपाली भाषामा उपलब्ध छन् । २०१३ मा गुगल अनुवादकमा नेपाली भाषा समावेश गरेको गुगल'ले, २०१४ मा जिमेल नेपाली भाषामा ल्याएको थियो भने, २०१५ मा युट्युब नेपाली भाषामा ल्याएको थियो।